''ကျောင်းသီချင်းတွေကို အခုထိ ပရိသတ် အားပေးမှု ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့သမိုင်?? - Yangon Media Group
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ရေးခဲ့၊ သီဆိုခဲ့တဲ့ ကျောင်းသီချင်း တွေကို ပြန်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ပြောပြလာတဲ့ တေးသံရှင်ကိုင်ဇာနှင့် တွေ့ဆုံခိုက် . . .
မေး-‘လိမ္မော်ရောင် ကောလိပ်ဂီတည’ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေစီစဉ်ထားလဲဆိုတာလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-အဓိကကတော့ ဒီပွဲမှာပါတဲ့တေးသံရှင်တွေကလည်း ၇ဝ၊ ၈ဝ၊ ၉ဝ ခုနှစ်က လူတွေ ကြည့်ကြမယ်။ လူတွေကလည်း ၄ဝ ကျော်ဆိုရင်တောင်မှ အငယ်ဆုံးများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ ဆရာကန်တော့ပွဲအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုအတွက် ကျင်းပတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ပရိသတ်ရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီးတော့ ပွဲလေးကိုစီစဉ်မှာပါ။ ဆိုလို တာက အဆိုတော်အယောက် ၂ဝ က တစ်ယောက်ကို နှစ်ပုဒ် စီလောက်ဆိုမယ်။ အဲဒီဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားသီချင်းတွေ၊ လိုက်ဆိုလို့ရမယ့်သီချင်းလေးတွေ ဆိုကြ ဖို့ကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်တစ် လှည့်စီတက်ဆိုနေတာမျိုးထက် ဂျေမောင်မောင်ဆိုနေတဲ့အချိန် မှာလည်း ချစ်ကောင်းနဲ့ တူးတူးက ပါမှာ။ တို့အဲဒီလိုမျိုး အကုန်လုံး ဝိုင်းပြီးတော့ စင်ပေါ်စင်အောက် ပျော်စရာညကြီးဖြစ်အောင်လို့ ပြင် ဆင်နေပါတယ်။ ကျောင်းသီချင်းလေးတွေလည်း ဆိုမယ်ပေါ့နော်။
မေး-အခုချိန်မှာ ကျောင်းသီချင်းတွေကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ စိတ်ခံစား ချက်က ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ သီချင်းတွေအကုန်လုံးက ဘယ်အ ချိန်ဆိုဆို ဆိုတဲ့အချိန်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ အတူတူပါပဲ။ သီချင်းတွေအကုန်လုံးက အသည်းနှလုံးထဲက လာတာပဲလေ။ သို့ သော်လည်း ကျောင်းပရိသတ်တွေ အများအပြားလာမယ့် ပွဲမျိုး မှာ ကျောင်းသီချင်းဆိုရတဲ့အရသာကတော့ ဘာကိုသွားအမှတ်ရ လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နှစ်ပတ်လည်အာစရိယပူ ဇော်ပွဲတွေကို ကျောင်းတွေမှာ မေဂျာအလိုက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေမှာ လုပ်ကြတယ်။ အားကစားရုံတွေမှာ ဆိုကြတီးကြ တာကို သွားအမှတ်ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ကျောင်းသီချင်း တွေဆိုတော့ အားပေးတဲ့သူတွေကလည်း ကျောင်းသားချင်းချစ် တဲ့စိတ်နဲ့ အားပေးတဲ့အားပေးမှုက နှစ်နှစ်ကာကာ ပြင်းပြင်းထန် ထန်ကို ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခံစားချက်တွေကို ဒီပွဲမှာကျောင်းသီချင်းတွေ ဆိုရင်းနဲ့ ပြန်ရမယ်လို့ထင်တယ်။
မေး-ကျောင်းသီချင်းတွေကို လူငယ်တေးသံရှင်တွေကလည်း ပြန်ဆို နေကြတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲ။
ဖြေ-အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ သီချင်းလေးတွေရဲ့ သမိုင်းပေါ့နော်။ သီချင်းလေးတွေက အခုချိန်ထိ အသက်ဝင်နေတုန်းပဲ။ လူငယ်တွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့လို့ ကျောင်းသားဘဝကို မဖြတ်သန်းခဲ့ပေမယ့် ဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ပြီးတော့ သီဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့ သမိုင်းက ဒီဘက်ခေတ်ထိကို အဓွန့်ရှည် နေတုန်းပဲဆိုတာက ပြယုဂ်တစ်ခုပဲ။ အဲဒီအတွက် ကြည်နူးပီတိဖြစ် ရပါတယ်။
သမိုင်းဝင် ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရား လှေဦးတိုက် ပွဲတော်တွင် ငှက်လှေအသင်း ၁၄ သင်း ပါဝင်ယှဥ?